Shirka madasha oo fashil ku dhaw iyo madaxda maamul goboleedyada oo maanta ka dhoofi doono Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka madasha oo fashil ku dhaw iyo madaxda maamul goboleedyada oo maanta ka dhoofi doono Muqdisho
Iyadoo maalintii shanaad uu xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka soconaayo shirka madasha wadatashiga qaran ayaa haatan shirkaasi u muuqdo mid weli la isku fahmi la’yahay qodobo dhowr ah.
Shirka ayaa waxaa la xaqiijiyay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeyadda dalka ay weli isku fahmi la’yihiin arrinta Aqalka Sare, waxayna dhibaatadu ka dhalatay kadib markii la isku dayay in Puntland lagu qanciyo inay dib usoo celiso labadii xubnood ee hore loogu kordhiyay.
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Guuleed oo arrintaan hormuud ka ahaa ayaa waxay u horseeday inuu taageero uga helo madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, Guddoomiyaha Barlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo keentay in C/weli Gaas uu arrintaasi si weyn uga caroodo.
C/kariin Guuleed ayaa markale go’doon siyaasadeed geliyay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas oo haatan u muuqda nin keligiis taagan, waxayna tani salka ku heysaa iyadoo uu shirkii hore ee madasha uu ka maqnaa Guuleed arrimo caafimaad awgeed, laakiin wuxuu ka hor yimid xubnaha loogu daray Puntland (HALKAAN KA AQRI)
Sidoo kale, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa talo kusoo jeediyay in gebi ahaan la-laalo qodobka Aqalka Sare ee Baarlamaanka, mar haddii waqti dheer uu qaatay weliba lagu heshiin waayay, waxayna arirntaasi isku badeshay is-faham-waa kale, laakiin waxaa Puntland lagu cadaadiyay inay ka tanaasusho xubnaha dheeraadka ah ee ka careysiiyay xubnaha Somaliland ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo arrintaasi aad uga carooday ayaa ugu danbeyn ka baxay goobta uu ka soconaayo shirka madasha wadatashiga qaran, wuxuuna sheegay inuusan sii wadi karin ka qeyb-galka shirkaasi ee aan natiijada lahayn.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo isagu u muuqday mid dhex-dhexaad ka ahaa arrintaasi ayaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho, isagoo ku laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in maalinta Ciidda uu doonayo inuu waqtigiisa lasoo qaato dadkiisa iyo shacabka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Warar hoose oo ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay qorsheynayaan inay maanta ka dhoofaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona dib ugu laaban doono deegaanada ay madaxda ka yihiin.
Shirka madasha wadatashiga qaran ayaa haatan u muuqda mid ku dhaw fashil islamarkaana iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin lagu kala tago, waxaana waqtigaan uu dalka ku jiraa waqti ciriiri ah oo la isku diyaarinaayo doorashada dalka ee 2016-ka.
Si kastaba ha ahaatee, maalmaha ciidda kadib ayaa la filayaa in madaxda shirka madasha wadatashiga qaran ay dib isugu soo laabtaan, iyagoona markale ka doodi doonna xalinta waxyaabaha la isku fahmi waayay, waxaana shirkaasi uu dhici doonnaa kadib markii uu dhamaaado shirka urur goboleedka IGAD oo maalinta Talaadada ah ka furmi doonno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.